ProZ.com ले PRO नेटवर्कलाई प्रमाणित गरेको छ
« ProZ.कम गृहमा फिर्ता
अहिले दरखास्त दिनुहोस् »
स्वतन्त्रहरूको लागि आवश्यकताहरू
ProZ.com द्वारा प्रमाणित PRO Network भनेको के हो?
ProZ.comप्रमाणित PRO नेटवर्क भनेको ProZ.com समुदायको पहल हो, जसको उद्देश्य विभिन्न भाषा युगलमा योग्यताप्राप्त अनुवादकहरूको पहिचान गर्नु हो र तिनीहरूलाई पूर्ण रुपमा छनौट व्यावसायिकहरूकोमा रहने नेटवर्किं र सहयोगी वातावरणको विकल्पसहित प्रदान गर्ने । नेटवर्कमा स्वीकृत हुनेले "ProZ.com प्रमाणित PRO" शीर्षक र सील कमाउनेछन्, जुन वैकल्पिक रुपमा प्रोफाइल पृष्ठहरू र ProZ.com वेबसाइट मा वा बाहिर प्रदर्शन गरिनेछ।
नेटवर्कमा सहभागिताका फाईदाहरू केके हुन्?
ProZ.com प्रमाणित PRO नेटवर्कमा सहभागी हुनाले उनीहरूलाई छुट्टाउन प्रमुख व्यावसायिकको लागि शक्तिशाली नयाँ साधन प्रदान गर्दछ, उनीहरूको विचित्र क्षमताहरूको प्रदर्शनबाट मात्र होईन (प्रकाशित उद्योग स्तरहरू राखेर), तर साथी/ग्राहक/आपूर्तिकर्ता समीक्षाबाट पनि र, चाडै, प्रमाणित ट्रायक रेकर्डहरू। यस समयमा, यस नेटवर्कले भेट्न र काम गर्नको लागि प्रमुख व्यावसायिकहरू र प्रमुख कम्पनीहरूलाई सजिलो तरिका प्रदान गर्छ, विशेष गरी जब त्यो काम सही गरिनु पर्छ र तदनुसार तिरिन्छ।
प्रमाणित हुनको लागि चाहिने आवश्यकताहरू केके हुन्?
अनुवादन योग्यता *
* EN 15038 मा आधारित
नोट: प्रमाणितPRO नेटवर्कमा भर्नाको लागिProZ.com पूर्ण व्यावसायिक सदस्यता आवश्यक पर्छ।; त्यस बाहेक, सहभागिताको लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन्।
अहिले सम्म पेश गरेको छैन्
नेटवर्कको लागि छनौट अहिले जारी छ। आजसम्म त्यहाँ:
ProZ.com ले PRO स्वतन्त्रहरूलाई प्रमाणित गरेको छ
मानिसले के भनि रहेका छन्
सहभागीहरूबाट धेरै टिप्पणीहरू